Funda Izingozi Zokuhweba Forex | Ukudalulwa kweengozi ye-FXCC
Ikhaya / Mayelana / 24 / 5 SUPPORT / Ukudalula Ingozi
Ukudalulwa Kwengozi Okujwayelekile
I-Client akufanele ihlanganyele noma yikuphi ukutshalwa kwezimali ngokuqondile noma ngokungaqondile kwi-Financial Instruments ngaphandle uma eyazi futhi eqonda izingozi ezihilelekile kwiComputer Instruments ngayinye. Ngakho-ke, ngaphambi kokufaka isicelo se-akhawunti iKlayenti kufanele icabange ngokucophelela ukuthi ukutshala izimali kwi-Instrument ethile yezezimali kufanelekile kuye ngenxa yezimo zakhe kanye nezinsiza zezimali.
Umthengi uxwayiswa ngalezi zingozi ezilandelayo:
INkampani ayinayo futhi ayikwazi ukuqinisekisa isiqalo sokuqala sephothifoliyo yeKlayenti noma ukubaluleka kwayo nganoma isiphi isikhathi nanoma iyiphi imali etshalwa yinoma yiluphi uhlobo lwezezimali.
I-Client kufanele ivume ukuthi, kungakhathaliseki ukuthi yiluphi ulwazi olungase lunikezwe yiNkampani, ukubaluleka kwanoma yikuphi ukutshalwa kwezimali ku-Financial Instruments kungashintsha phansi noma phezulu futhi kungenzeka ukuthi ukutshalwa kwezimali kungabi nzuzo.
I-Client kufanele ivume ukuthi ibeka ingozi enkulu yokufaka ukulahlekelwa kanye nokulimala ngenxa yokuthenga kanye / noma ukudayiswa kwanoma yisiphi isisetshenziswa sezezimali futhi uyavuma ukuthi uzimisele ukwenza le ngozi.
Ulwazi lokusebenza kwangaphambilini kwe-Instrument Financial akuqinisekisi ukusebenza kwayo kwamanje kanye / noma esikhathini esizayo. Ukusetshenziswa kwedatha yezomlando akuyona into ebophezelayo noma ephephile mayelana nokusebenza okuzayo okuzayo kwezingxenye zezezimali ezibhekiswe kulolu lwazi.
Ngakho-ke iKlayenti iselulekwa ukuthi ukuthengiselana okwenziwe ngokusebenzisa izinsizakalo zeNkampani kungaba yinto yokucabanga. Ukulahlekelwa okukhulu kungenzeka ngesikhathi esifushane, ukulinganisa inani lezimali ezibekwe neNkampani.
Amanye ama-Instrument Financial angase angabi ngokushesha ngamanzi ngoba umphumela wesidingo esinciphile futhi iKlayenti kungenzeka ukuthi ingasakwazi ukuzithengisa noma kalula ukuthola ulwazi ngokubaluleka kweziNsimbi zeMali noma ubukhulu bezingozi ezihambisanayo
Uma i-Instrument Yezezimali ithungiswa ngemali ngaphandle kwezimali zezwe leKlayenti yokuhlala, noma yiziphi izinguquko emazingeni okushintshaniswa zingase zibe nomthelela omubi ngokubaluleka kwayo, intengo nokusebenza.
I-Instrument Yezezimali ezimakethe zangaphandle ingafaka izingozi ezihlukile kwezingozi ezijwayelekile zezimakethe ezweni lakwaKlayenti. Kwezinye izimo, lezi zingozi zingase zibe ezinkulu. I-prospect of profit or loss from transactions kwizimakethe zangaphandle nayo ithinteka ekushintsheni izinga lokushintshaniswa.
I-Instrument Financial Financial (okuyikhetho, ikusasa, phambili, ishintsho, i-CFD, i-NDF) ingaba yindawo yokuthengiswa kwezindawo ezingekho ukulethwa enikeza ithuba lokwenza inzuzo ekushintsheni kwamazinga emali, izimpahla, izinkampani zamasheya noma amanani abiwa ngokuthi yi-instrument . Inani le-Instrument Financial Derivative lingathinteka ngokuqondile ngentengo yokuphepha noma yimuphi omunye ongeyena osebenzayo okuyiyona into yokuthola.
Izibambiso ezibonakalayo / izimakethe zingaba nzima kakhulu. Amanani e-Derivative Financial Instruments, kufaka phakathi ama-CFD, kanye nempahla ephansi kanye nama-Indices angashintsha izigaba eziphezulu futhi ezingaphezulu futhi angabonisa imicimbi engabonakali noma izinguquko ezimweni, futhi akukho okungalawulwa yiKlayenti noma iNkampani.
Amanani ama-CFD azosuswa, phakathi kwezinye izinto, ukushintsha ukuthengwa nokufuna ubuhlobo, izinhlelo zikahulumeni, ezokulima, ezentengiselwano kanye nezentengiselwano, izenzakalo zezwe nezamanye amazwe ezombusazwe nezomnotho kanye nezici zengqondo ezikhona endaweni efanele emakethe.
I-Client akufanele ithenge i-Instrument Financial Instrument ngaphandle kokuba izimisele ukwenza izingozi zokulahlekelwa ngokuphelele yonke imali ayitshale yona kanye nanoma yimiphi amakhomishana engeziwe nezinye izindleko ezenziwe.
Ngaphansi kwezimo ezithile zemakethe kungase kube nzima noma akunakwenzeka ukukhipha umyalelo
Ukubeka ama-Stop Loss Orders ukhonza ukunciphisa ukulahlekelwa kwakho. Kodwa-ke, ngaphansi kwezimo ezithile zemakethe ukukhishwa kwe-Stop Loss Order kungase kube kubi kakhulu kunalokho okushiwo ngakho kanye nokulahlekelwa okungahle kube khona kunalokho okulindeleke.
Uma imali ye-margin inganele ngokwanele ukubamba izikhundla zamanje ezivulekile, ungabizwa ukuba ubeke imali eyengeziwe ngesaziso esifushane noma unciphise ukuchayeka. Ukwehluleka ukwenza njalo ngesikhathi esidingekayo kungabangela ukuchithwa kwezikhundla ekulahlekelweni futhi uzobe ubophezela noma yikuphi ukulahleka okubangelwayo.
Ibhange noma Broker okubhekiswe kulo iNkampani ingaba nezintshisekelo eziphambene nezintshisekelo zakho.
Ukwehliswa kweNkampani noma iBhange noma Broker esetshenzisiwe yiNkampani ukuqhuba ukuthengiselana kwayo kungaholela ezikhundleni zakho ukuvalwa ngaphandle kwezifiso zakho.
Ukunakekelwa koMthengi kukhonjiswe ngokuqondile kwizimali ezihwebiwe ngokweqile noma ngokungajwayelekile ukuthi ngeke ukwazi ukuthi intengo izocatshangwa ngaso sonke isikhathi noma kungase kube nzima ukwenza ukuthengiswa ngentengo engase icatshangelwe ngenxa yokungabikho kwekhasi iqembu.
Ukuhweba nge-inthanethi, kungakhathaliseki ukuthi kulula kangakanani noma kusebenza kahle, akunciphisanga izingozi ezihlobene nokuhweba ngemali
Kunengozi ukuthi imisebenzi yeCentent in Financial Instruments ingaba noma ibe ngaphansi kwentela kanye / noma yimuphi omunye umsebenzi ngokwesibonelo ngenxa yezinguquko emthethweni noma ezimweni zakhe. I-Company ayivumeli ukuthi akukho intela kanye / noma enye enye imisebenzi yesitembu izokhokhwa. I-Client kufanele ibe necala kunoma yiziphi izintela kanye / nanoma yimuphi omunye umsebenzi ongase uphume ngokuphathelene nemisebenzi yakhe.
Ngaphambi kokuba iKlayenti iqale ukudayisa, kufanele athole imininingwane yazo zonke izinkomishana kanye nezinye izinkokhelo ezizokwaziswa yiKlayenti. Uma ngabe yiziphi izinkokhelo ezingabonakaliswa ngemibandela yemali (kodwa njengesibonelo njengokusakazwa okubhekene nakho), iKlayenti kufanele icele incazelo ebhaliwe, kufaka phakathi izibonelo ezifanele, ukubeka ukuthi yiziphi izinkokhelo okungenzeka ukuthi zisho ngemibandela ethile yemali
I-Company ngeke inikeze iKlayenti iseluleko sokutshala izimali ngokuphathelene nokutshalwa kwezimali noma ukuthengiswa okusemandleni ekutshaleni noma ukwenza izincomo zokutshala izimali kwanoma yiluphi uhlobo
INkampani ingadingeka ukuthi ibambe imali yeKlayenti kwi-akhawunti ehlukaniswe kwamanye amaklayenti nemali yeNkampani ngokuhambisana nemithethonqubo yamanje, kepha lokhu akukwazi ukukhokhela ukuvikelwa okuphelele
Ukuthengiselana nge-Platform Yokuhweba E-inthanethi kuthwala ingozi
Uma iKlayenti yenza ukuthengiselana ohlelweni lwe-elekthronikhi, uzobe esengozini ezihambisana nesistimu kufaka ukwehluleka kwe-hardware ne-software (i-intanethi / amaseva). Umphumela walokho ukwehluleka kwesistimu kungenzeka ukuthi umyalelo wakhe awukwenziwa ngokulandela imiyalo yakhe noma awukwenziwa nhlobo. I-Company ayamukeli noma yikuphi icala uma kwenzeka ukwehluleka okunjalo
Izingxoxo zocingo zingabhalwa, futhi uzokwamukela ukurekhoda okunjalo njengobufakazi obunembile nezibophezelayo
Lesi saziso asikwazi futhi asidalula noma sichaze zonke izingozi nezinye izici ezibalulekile ezihilelekile ekusebenzeni kuzo zonke izinsiza zezezimali nezokutshalwa kwezimali